OEM, ODM na-anabata
logo silkscreen (mmezi)
Ngwa: Ihe enyemaka mbụ a dị mma maka iji ihe eji eme ihe kwa ụbọchị ma ọ bụ ihe ọhụụ, gụnyere: ụlọ, ọfịs, ịma ụlọikwuu, ụgbọ ala, ụlọ nri, ụgbọ ala, egwuregwu, ụgbọ mmiri, njem njem, ebe ọrụ na ụlọ akwụkwọ wdg.
Ngwa ihe mberede ga-enye gị ihe ngwọta maka ndahie efu kwa ụbọchị na ọbụnadị n'ọzara ọgụ n'ọhịa trauma ọnọdụ, gụnyere gụnyere: ọnwa ogologo njem ụgbọ mmiri kayak, obere ihe ọghọm anụ ụlọ na nsogbu ụmụaka na-adị kwa ụbọchị. Debe ngwa a n'ime akpa gị, ogige aka ụgbọ ala ma ọ bụ ụlọ ọrụ ahụike maka ngwa ngwa na ngwa ngwa maka nsogbu.
Agba: enwere Uhie / Oji Grey / Oku, nhazi
Size: 19 x 10 x 13cm, ma ọ bụ nhazi
Ihe enyemaka mbụ, ma ọ bụ oku ịlanarị, na-abịa n'ọtụtụ ụdị dị iche iche ma jupụta na ngwa ngwa mberede nke ga - enyere gị aka ịlanarị! Ihe nkiti nke ihe enyemaka mbu buru ibu na 19x10x13cm, odi mfe iji buru ma buru maka ozara ma obu onodu ndu. Ngwa enyemaka mbụ nwere ike ịbụ akụkụ nke ngwa nlanarị ma ọ bụ obere ngwa nlanarị na mgbakwunye na ngwaọrụ ndị ọzọ, akụrụngwa nchekwa onwe onye, ​​akụrụngwa na akụrụngwa.
Anyị nwere ike ibipụta gị logo na ahu, ma ọ bụ sewn logo labeelu n'ime.
OEM & ODM dị maka ọrụ ọhụụ ọhụrụ, ma ọ bụ mee mgbanwe ụfọdụ na atụmatụ anyị dị adị. biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị ebe a.
Ngwaahịa a bụ akpa efu, na-enweghị ngwaọrụ ọ bụla.
Q3: Gini banyere ugwo Okwus?
A4: 5,000pcs na-eme kwa ụbọchị, oge nnyefe bụ 35 ~ 50days, nke dabere na ngwaahịa na ịtụ ọnụ, anyị nwere ọtụtụ narị igwe ịkwanye iji kwado nkwụsi ike na ọsọ ọsọ na nnyefe.
Mmadụ Bịa kpọtụrụ anyị maka ajụjụ ọ bụla ma tụlee nkọwa.
A5: Ee, eziokwu. Biko nye ihe osise ahụ, anyị ga-akwadebe ihe osise ahụ maka nnabata gị tupu ịmalite ọrụ.
A7: MOQ bụ 500. Ọzọkwa, biko biko lelee anyị maka ngwaahịa ọ bụla dị maka iji nweta ngwa ngwa.
Anyị nwere ndị ọrụ R & D siri ike iji kwado mmepe ahụ, dị ka ọtụtụ nhọrọ ihe onwunwe, agba swatch, logo & puller design & tooling, n'ime lining imewe, n'omume, Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị maka nkọwa.
Osote: FFP2 NR AKW FKWỌ AKW FKWỌ HALF MASK
Akpa Enyemaka Mberede
Akpa Enyemaka Enyemaka
Akpa Enyemaka Kit obere akpa
Ihe Nlekọta Enyemaka nke Hospitallọ Ọgwụ
Supplọ Ọgwụ Na-enye Enyemaka Mbụ
Vlanahụ Enyemaka Mbụ
AKW AKWỌ AKWIDKWỌ AKW FKWỌ FB002
AKW AKWỌ AKWIDKWỌ AKW FKWỌ FB005
Akpa Enyemaka kit
AKW AKWỌ AKWIDKWỌ AKW FKWỌ FB003